Wiil Dhalinyaro ah oo loo Dilay Bandowga Muqdisho iyo banaan bax ka dhashay - Awdinle Online
Wiil Dhalinyaro ah oo loo Dilay Bandowga Muqdisho iyo banaan bax ka dhashay
April 24, 2020 ( Awdinle Online) – Dad careysan ayaa banaan bax rabshado wata waxay caawa ka bilaabeen agagaarka Isgoyska Jubba ee magaalada Muqdisho, ka dib markii askari ka tirsan ciidanka booliska uu qof shacab ah uu dilay, qof kalena dhaawacay.
Dadka Banaanbaxayaasha ah oo ka careysan dilka wiilka dhalinyarada ah iyo dhaawaca qofka kale ayaa taayaro ku gubay inta dhaxeysa Isgoyska Jubba iyo dugsiga Bartamaha ee Degamadda shangaani.
Falkan dilka ah ayaa goobta ka dhacay xilligii Bandowga ee dowladda ku soo rogtay muqdisho ee 7-da Fiidnimo, ka dib markii kaga uu soo hormaryay saacad.
Askariga dilka geystay ayaa ka tirsan Ciidanka Booliska, waxaana la sheegay inuu ku sugnaa bar koontaroolka ee Ciidamada Booliska ku hubiyaan gaadiidka.
Wararka qaar ayaa sheegaya in labada qof ee dilka iyo dhaawac loo geystay ay ahaayeen wiil iyo gabar degenaa agagaarka Wasaaradda Boostada iyo Isgaarsiinta, ee Degamadda Boondheere kuwaasoo banaanka fadhiyay afurkii ka dib, waxaana ay diideen amarka uu askariga siiyay ee ahaa inay xaroodaan.
Shacabka reer Muqdisho ayaa gebi ahaanba walaac ka muujiyay amarka Dowladda ee soo rogida Bandowga bisha Ramadaan, maadaama 7-da Fiidnimo ay jiraan dad goob kale ka afura ama maqaayado, sidaasna Bandowga u sameynayo, isla markaana salaada cishaha iyo taraawiixda uu saameyn ku yeelanayo.
Previous articleSoonku wuxuu ka hortag u yahay cadaadiska-dhiigga,kansarka iyo sokorta !
Next articleGuddoomiyaha Gobolka Banaadir oo ku baxay xalinta banaan baxyadii rabshadaha watay